PSP game download — MYSTERY ZILLION
December 2011 edited December 2011 in Other
PSP game တွေဘယ်မှာလွယ်လွယ်နဲ့ယူလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျ
freesoft88.blogspot.com မှာအစုံ free-kick လုပ်လို့ရတယ်ဗျ.. con ကောင်းဖို့ပဲလို့မယ်
Better is www.pspiso.com try these one..
ok i will try it thanks
You can get All of PSP GAMES from this site
PSP ကို Modify ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသိချင်ပါတယ်။
It will be change your psp Model and Firmware . downgrade , OFW to CFW ?
model အမျိုးအစားရယ် လုပ်ချင်တဲ့ firmware version ရယ် google or youtube မှာရိုက်ပြီးရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ version 5.03 တုန်းကတော့ chickhen on ပြီး CFW enabler နဲ့လုပ်ရပါတယ်။ အခု version 6.60 မှာတော့ 660 Pro-B updater တစ်ခုတည်းနဲ့ OFW to CFW ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ version upgrade ကို Official site ဒေါင်းပြီးသွင်းပါ။ CFW ပြောင်းဖို့တော့ google မှာစောစောကပြောသလိုရှာကြည့်ပါ။ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။